သီချင်းနားထောင်နေရင်း ကြက်သီးမွေးညှင်းထသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံဖူးလား?? – Trend.com.mm
Posted on October 21, 2018 October 17, 2018 by Noel
Harvard တက္ကသိုလ်က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Matthew Sachs ရဲ့ အဆိုအရ သီချင်းနားထောင်ရင်းကြက်သီးမွေးညှင်းထောင်သွားတဲ့သူတွေ၊ကြက်သီးထသွားတတ်တဲ့သူတွေဟာ တကယ်တော့စူပါဘရိန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါပဲတဲ့။
သူဆိုရင် “Bohemian Rhapsody” နားထောင်ရင်း ကြက်သီးထတတ်ပါတယ်တဲ့။သူ့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ သီိချင်းနားထောင်နေရင်းကြက်သီးထသွားတာကိုခံစားလိုက်ရတဲ့သူတွေမှာ ထူးခြားပြီး ရှားပါးတဲ့ဦးနှောက်စွမ်းရည်မျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ကျောင်းသားအယောက် ၂၀ ကိုသီချင်းနားထောင်ခိုင်းပြီးစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျောင်းသား ၁၀ ယောက်ကသာ ကြက်သီးထသွားပြီး နောက်ထပ် ၁၀ယောက်က ဘာမှမခံစားရပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ ဦးနှောက်ကို Scan ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံတွေမတူညီတာကိုသွားတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကြက်သီးထသွားတာကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်က အမျှင်တွေဟာ အသံပိုင်းဆိုင်ရာကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါပဲ။ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးကြက်သီးထသွားတယ်၊လက်မွှေးလေးတွေထောင်သွားတယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်က တစ်ခြားသူတွေထက် ပိုပြီးနက်ရှိုင်းတယ်၊စိတ်စွမ်းအားပြင်းတယ်ဆိုတာပြနေတာပါ။ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဒီလေ့လာချက်ကိုလုပ်ရတာက စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့သူတွေကို သီချင်းကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးစိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်အောင်ကူညီပေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းသိရပါတယ်။သင်ရော သီချင်းနားထောင်နေရင်းကြက်သီးထသွားတတ်လား?
Harvard တက်ကသိုလျက ကြှမျးကငျြပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Matthew Sachs ရဲ့ အဆိုအရ သီခငျြးနားထောငျရငျးကွကျသီးမှေးညှငျးထောငျသှားတဲ့သူတှေ၊ကွကျသီးထသှားတတျတဲ့သူတှဟော တကယျတော့စူပါဘရိနျးကိုပိုငျဆိုငျထားတာပါပဲတဲ့။
သူဆိုရငျ “Bohemian Rhapsody” နားထောငျရငျး ကွကျသီးထတတျပါတယျတဲ့။သူ့ရဲ့ရှာဖှတှေရှေိ့ခကျြအရ သီိခငျြးနားထောငျနရေငျးကွကျသီးထသှားတာကိုခံစားလိုကျရတဲ့သူတှမှော ထူးခွားပွီး ရှားပါးတဲ့စှမျးရညျမြိုးပိုငျဆိုငျထားတယျလို့သိရပါတယျ။
ကြောငျးသားအယောကျ ၂၀ ကိုသီခငျြးနားထောငျခိုငျးပွီးစမျးသပျကွညျ့တဲ့အခါမှာ ကြောငျးသား ၁၀ ယောကျကသာ ကွကျသီးထသှားပွီး နောကျထပျ ၁ဝယောကျက ဘာမှမခံစားရပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ ဦးနှောကျကို Scan ဖတျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာ ဦးနှောကျတညျဆောကျပုံတှမေတူညီတာကိုသှားတှခေဲ့ရပါတယျ။ကွကျသီးထသှားတာကိုခံစားလိုကျရတဲ့ကြောငျးသားတှရေဲ့ ဦးနှောကျက အမြှငျတှဟော အသံပိုငျးဆိုငျရာကိုတုံ့ပွနျတဲ့နရောမှာ ပိုပွီးကောငျးမှနျတာကိုတှရှေိ့ခဲ့ရတာပါပဲ။ပွီးတော့ ဒီလိုမြိုးကွကျသီးထသှားတယျ၊လကျမှေးလေးတှထေောငျသှားတယျဆိုတာ သငျ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြက တဈခွားသူတှထေကျ ပိုပွီးနကျရှိုငျးတယျ၊စိတျစှမျးအားပွငျးတယျဆိုတာပွနတောပါ။ဦးနှောကျလုပျဆောငျခကျြနဲ့ပတျသကျလို့ကောငျးမှနျတဲ့အခကျြလညျးဖွဈပါတယျ။
သူဒီလလေ့ာခကျြကိုလုပျရတာက စိတျဓာတျကနြတေဲ့သူတှကေို သီခငျြးကနတေဈဆငျ့ပွနျပွီးစိတျဓာတျမွှငျ့တငျပေးနိုငျပွီး စိတျပြျောရှငျအောငျကူညီပေးခငျြတဲ့အတှကျကွောငျ့လို့လညျးသိရပါတယျ။သငျရော သီခငျြးနားထောငျနရေငျးကွကျသီးထသှားတတျလား?
ဒီသုံးချက်နဲ့ကိုက်ညီနေရင်တော့ ယူတို့က ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေပဲ
မကြာခဏဆိုသလို မျက်ရိုးကိုက်တတ်ရင် ဒီနည်းလေးတွေသိထားသင့်